दशैमा गाउ आएको छोरोले आफनै बाउलाई खुत्रु*कै पर्यो। आमाको टाउको फु*टाइ दियो। दशै लाई द*शा बनायो | Public 24Khabar
Home News दशैमा गाउ आएको छोरोले आफनै बाउलाई खुत्रु*कै पर्यो। आमाको टाउको फु*टाइ दियो।...
Previous articleभर्खरै नेपालमा पहिलोपल्ट दु*र्लभ रेकर्ड, संक्र*मित भन्दा को*रोना जित्नेको संख्या यतिधेरै !
Next articleनेपालमा झैँ गरी म्यानमारमा पनि दशैँ मनाउँछन् यसरी ! कसरी सुरु भयो चलन?